Ezempilo, Impilo yengqondo
Uyazi ukuthi cishe abangaba ngu-15% wabo bonke abantu abalele ekuguleni kwabo bawagaya amazinyo. Kubalulekile futhi ukuthi inani labantu abahlushwa amazinyo okugaya likhula njalo. Ukunciphisa ukuhlanza kwe-musculature, okwenzeka ngokungazibandakanyi futhi kubangele ukuququda kwamazinyo ephusheni, ezincwadini ezikhethekile kuthiwa yi-bruxism. Igama elithi bruxism livela kulesiGreki-brychein, okusho ukukhipha amazinyo akho. UBruxism kwenzeka ngokuvama okulinganayo kokubili abadala nabantwana.
Kuphi ukugaya amazinyo akho ekuphupheni?
Okwamanje, ososayensi abakwazi ukucacisa izimbangela eziqondile, okuvela kuyo lapho bega amazinyo ephusheni. Kodwa ngalesi senzakalo kusekhona ezinye izicabangela. Omunye wabacwaningi uhamba ngezinyawo ukuze akholelwe ukuthi i-creak yamazinyo ingenye yezibonakaliso eziningi zokuphazamiseka kokulala, noma kunalokho ukujula kwayo. Ukubamba ngamazinyo, njengokunqoba, kuvame ukuhlotshaniswa nokuqothulwa kwamahloni okuthukuthelisa abanye abantu.
Abanye ososayensi bakholelwa ukuthi abantu abanesifo sokukhubazeka kwamazinyo bagubha amazinyo ephusheni, futhi kuze kube yilapho le nkinga ixazululwa, i-bruxism ngeke iphele. Kukhona nombono wokuthi isizathu sokwenza amazinyo kuwukukhona kwe-reflex eseleyo kubantu abathile, okufana ne-reflex yezilwane, okuyinto ngaleyo ndlela ivuse amazinyo.
Enye incazelo yokuthi abanye abantu ebuthongweni babo bagaqa amazinyo ukudluliswa kwalesi sifo nge-heredity. Ayikho imibono ecacile mayelana nokubandakanyeka kwezakhi ezithile zegciwane, kodwa lokhu kucatshangelwa kucatshangwa ngokujulile ngabososayensi.
Noma kunjalo, umbuzo othi "Kungani ugawula amazinyo ephusheni?" Iningi labachwepheshe balungele ukunikeza impendulo elandelayo. Labo abajwayele ukugaya amazinyo ephusheni yibo ababhekana nezimo ezicindezelayo, okubangelwa ukukhathazeka nokungezwani kwangaphakathi. Ngenxa yalokho, kunesidingo esikhulu ngaphambi kokulala. Kuyiqiniso, ukubuthwa kwe-bruxism kungabonwa ngokuzolalisa abantu abanomlingani olinganiselayo futhi hhayi ekutheni kube nokubonakaliswa kobudlova kwemizwelo.
Uma sikhuluma ngo-bruxism wengane, iningi lezingane lezi zici azikasongelwa yinoma yini futhi zidlula, njengomthetho, oneminyaka yobudala. Noma kunjalo, izazi zincoma kakhulu kwezinye izimo ukuba zibonane nesazi sezifo zengqondo. Ngezinye izikhathi izingane ezinjalo zidinga usizo olukhethekile noma i-psychotherapy, futhi kwezinye izimo zingabonisa ukukhathazeka okukhulu kwesimo sengqondo.
Uma uphupha amazinyo ephusheni, yini engayisongela umuntu ojwayele lesi sifo?
Okokuqala, ikhanda kanye nobuhlungu bamazinyo.
Esikhathini esizayo, lesi sici singabangela ukulimala kwethambo kanye nezinguquko emathanjeni omhlathi.
Kungabuye kuholele ekwandeni kokuzwela kwamazinyo nokugqoka kwabo okusheshayo.
Wenzani uma izihlobo zakho zibopha amazinyo ephusheni?
Okokuqala futhi okubaluleke kakhulu, izindlela zengqondo nezengqondo zinconywa ukuthi zisiza ukuqeda ukucindezeleka noma ukunciphisa kakhulu umthelela wabo omubi. Endabeni yokuthuthukiswa kwalenkinga enganeni, kufanele ngokuqinisekile unciphise ukucindezeleka okucindezelayo, ikakhulukazi ngaphambi kokulala. Uma lo mkhuba uhlala unomphela, ukubonisana njalo wamazinyo kuyadingeka ukuba uqaphele isimo sezinyo zomntwana wakho. Unganikeza ingane ukuba idle ngaphambi kokulala i-apula noma izaqathe. Ukuzivocavoca okulula kuzomsiza ukuba aphumule imisipha futhi anciphise amathuba okugaya amazinyo akhe ephusheni. Enye indlela evumelana ngayo abadala nabantwana kuyinkimbinkimbi eshisayo, umphumela wayo uzoba ukuphumula komzimba.
Njengoba sesishilo kakade ukuthi labo abacindezelekile bahlushwa ebuthongweni babo, kuyinto efiselekayo ukuwanikeza izinyathelo zokuvimbela ukucindezeleka: ukudla okuvamile, ukukhipha noma ukunciphisa ukusetshenziswa kwe-caffeine, umphumela omuhle uzoba nokuhamba ngaphambi kokulala. Ngaphezu kwalokho, kunconywa ukwakha usuku lwakho lokusebenza ngendlela yokuthi ungabandakanyi imithwalo egcwele ngokweqile. Kunconywa ukugwema ukungqubuzana nokuxabana noma kunini lapho kunokwenzeka khona, uma kunesidingo, ngezinye izikhathi kungenzeka ukuthi uthathe izidakamizwa nge-herbs epholile ngaphambi kokulala.
Noma kunjalo, kufanele ukhumbule ukuthi ukwelashwa kwe-bruxism kuwukuphela komuntu, ngakho-ke noma iyiphi imithi kufanele ihambisane nokubonisana nabachwepheshe.
Imibono ephuthumayo neyengeziwe: incazelo. I-Syndrome yemibono engaphezulu
I-panic: yikuphi, izimbangela nezici zokubonakaliswa. Ukuhlaselwa Kwezinhlupho: Izimpawu Nezokwelapha
Voltage transformer - ithuluzi esisemqoka
Kanjani ukulala ubusuku bonke. Srestva ukuba simelane ubuthongo